DirectChat (အားလုံးအတှကျအ ChatHeads) | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » DirectChat (အားလုံးအတှကျအ ChatHeads)
DirectChat (အားလုံးအတှကျအ ChatHeads) APK ကို
DirectChat သင်သည်မည်သည့် app သို့မဟုတ်တမန်များအတွက် ChatHeads ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဖတ်ခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်အွန်လိုင်းလာမယ့်စရာမလိုဘဲအားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျမှ reply နိုငျကွောငျးသင့်လက်ရှိတာဝန်ထိုကဲ့သို့သောကွားဖွတျမရှိဘဲအဆင်ပြေစကားလက်ဆုံရှိသည်ဖို့သင်ကူညီတစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုစီမံခန့်ခွဲ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် 20 တမန်တို့ကိုထက်ပိုပြီးထောက်ခံမှုနှင့်အတူကြွလာ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အသိပေးချက်များကို ChatHeads ပေါ်လာချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစသင့်လျော်သည်။ သင်တို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းနဲ့လင်းမြင်သာမှုနှင့်အတူသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဖို့ချက်တင်အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။အင်္ဂါရပ်များ
အားလုံး apps တွေအတွက် ChatHead ပံ့ပိုးမှု
သီးသန့်လုံခြုံရေး Mode ကို - ဖတ်နှင့်အွန်လိုင်းလာမယ့်နဲ့နောက်ဆုံးမြင်ကြဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုဘဲအားလုံးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ reply!
MultiWindow / multitasking - ဆို window ၏ထိပ်ကိုကျော် Chat!
စင်ကြယ်သောအစီအစဉ် - နယူး ChatHeads stack ၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထိပ်ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့် window ကိုရှုပ်ပွနေအောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
DND Mode ကို - ယာယီအဆိုပါ ChatHead Service ကို Pause နှင့်၎င်း၏အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိရပ်တန့်။
အမည်ပျက်စာရင်း Apps ကပ - Disable လုပ်ထား ChatHeads အချို့သော apps များပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့
အသုံးပြုသူများကိုပိတ်ဆို့ထား - အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ကနေပေါ်လာဖို့ ChatHeads ကိုပိတ်ထားပါ။
Lockscreen ထောက်ခံမှု - ဆိုတမန်များအတွက် lockscreen မှတိုက်ရိုက် Chat ။Pro ကိုအင်္ဂါရပ်များ
လက်ငင်းစာပြန်ရန် - သင်လျင်မြန်စွာသှ w / o ဖွင့်လှစ် Chat ကိုဖွင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို preview ကိုကနေ reply ခွင့်ပြုပါသည်
မကြာမီက chat နဲ့အချိန်မရွေးတစ်ခုခုအတိတ်စကားပြောဆိုမှုမှတ်မိ
ChatHeads အားလုံးကို Apps ကပ Unlock
ပူဖောင်းနဲ့ Chat ကို Window င့်လင်းမြင်သာ
အမျိုးမျိုးသော Predefined Themes
default ထောက်ပံ့ Messengers
(က Android N ကို + များအတွက်) Messenger ကို Lite ကို
(က Android N ကို + များအတွက်) Instagram ကို
(က Android N ကို + များအတွက်) စိတ်တိုးပွား
(က Android N ကို + များအတွက်) ဝါယာကြိုး
ဖတ်အဖြစ်မာကု (Pro ကို) Apps ကပ Supported
Hangout သို့ (Android ကိုအော်တို App ကိုလိုအပ်)
Textra (Textra ချိန်ညှိမှုများအတွက်လိုအပ်သော & အော်တိုပေါင်းစည်းမှုကို Android အော်တို)
Chomp SMS ကို
စင်ပြိုင် Space ကို
အများစုမှာစတော့အိတ် Messaging app များ
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် add Settings app နှင့်သင် chatheads ဖော်ပြရန်ချင်ရာများအတွက် apps များကို enable သွားသည်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သတိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ, ChatHeads ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
* စာပြန်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသာသူတို့ရဲ့သတိပေးချက်ထဲမှာကိုထောက်ပံ့သော apps များအတွက်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ခွင - DirectChat အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသံတမန်မဆိုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါမဟုတ်သလိုကထုတ်ကုန်မဆိုထောက်ခံပါဘူး။ ဒါဟာသဟဇာတတမန်တို့ကိုထွက်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်သူတို့အဆိုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံပါဘူးသာ။ အဲဒီအစားသူကအဝင်အကြောင်းကြားစာများဖတ်ရှုဖို့ Google ရဲ့အများပြည်သူ API ကိုအသုံးပြုသည်။
- (Pro ကို) ကိုယ်တိုင်ဆက်ပြောသည် app များကိုအလိုအလျှောက်၎င်း၏ app ကိုအရောင်အရသိရသည် themes များလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်
- စိတ်တိုးပွားခြင်းနှင့်ဝါယာကြိုးအဘို့အ Added ထောက်ခံမှု
- GroupMe, လိုင်း, ကြေးနန်းနှင့်အတူ Fixed ထပ်တူများကို & Group မှ Chat ကို
- အကွိမျမြားစှာ filter ကိုစကားလုံးများကိုယခု (,) ကော်မာကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်
- app ကိုဖြန့်ချိ option ကိုဖဲ့ကြောင်း Fixed bug ကို
9.31 ကို MB
ခံစားချက် Messenger ကို - ...
Reos ကို SMS: Android မှာ ...
ကြေးနန်း Messenger ကို
ဖျောက် - အပြာရောင်အမှန်ခြစ် ...